99% झुक्किएको प्रश्न फोटोमा तल क्लिक गरेर उत्तर दिनुहाेस - सुदूर नेपाल
99% झुक्किएको प्रश्न फोटोमा तल क्लिक गरेर उत्तर दिनुहाेस
के तपाईं अाफ्नाे बौद्धिकताकाे लेखाजोखा गर्न चाहानुहुन्छ? चाहानुहुन्छ भने सोचेर दिनुहाेस तलकाे प्रश्नकाे सहि उत्तर । याे अलि झुक्याउने खालकाे प्रश्न भएकाेले साेचेर मात्र उत्तर लेख्नुहाेला अन्याथा तपाईंको जवाफ गलत पनि हुनसक्छ ।
तपाईंको लागि प्रश्न यसप्रकार छ : दुइ एक दुई तिन कुन हाे ? प्रश्न फेरि पढ्नुहाेस :दुइ एक दुई तिन कुन हाे ? प्रश्न पढ्नु भाे भने तपाईंको दिमागमा झट्ट प्रश्न अनुसारकाे जवाफ अायाे हाेला तर एकछिन साेच्नुस कि प्रश्नले भन्न खाेजेकाे के हाे? प्रश्न फेरि पढ्नुहाेस : दुइ एक दुई तिन कुन हाे ?
अघिसम्म प्रश्न सुन्दा झुक्किनु भएकाे थियाे भने अब त पक्कैपनि केही न केही बुझ्नु भयाे हाेला । कि प्रश्न नै झुक्याउने खालकाे छ । यसकाे मतलब याे हैन कि सबैले जान्नु भएकाे थिएन । झट्ट सुन्दा झुक्किनेहरुकाे लागि अब उत्तर ठम्याउन गाह्राे नहुन सक्छ ।नाेट: यी र यस्तै प्रश्नहरु कुनै कुनै परिक्षामा तपाईं हामिलाई अाउने गर्दछन । यश प्रश्नले दिमागमा उत्तर अायाे भन्दैमा हतार नगर्नुस एकछिन साेच्नुस भन्ने सन्देश सबैलाई दिन खाेजेका हौ । हतारकाे निर्णय कहिलेकाहि अाफैलाई भारी परिदिन्छ । तसर्थ केहि निर्णय गर्दा एकछिन भएपनि साेच्ने बानपकाे बिकास हामि सबैमा हुनुपर्दछ ।
Previous Post: सेयर गरौ ! अशोक दर्जीले गरे १० लाख सहयोग कहाबाट आयो यति रकम? भिडियो
Next Post: सेयर गरौ !भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले महाकुम्भ मेलाका सरसफाइ कामदारका खुट्टा धोए: भिडियो भाईरल हुदै